Microsoft mandefa Nokia 216, telefaona misongadina ho an'ny tsena vao misondrotra | Vaovao momba ny gadget
Microsoft mandefa ny Nokia 216, telefaona asongadin'ny tsena vao misondrotra
Ignatius Room | | General, Finday, telephony
Ireo tovolahy ao Redmond noho izany dia tsy mifantoka amin'ny fizarana finday findainy fotsiny mba hiezaka hanana toerana eo amin'ny tsena, fa koa dia mandray an-tanana ireo tsena vao misondrotra izay mbola ampiasaina hatrany ny fampiasana finday avo lenta. Vao avy nanolotra ny Nokia 216 Dual SIM i Microsoft, terminal toy ny taloha, fa miaraka amn'ny famaritana maoderina manome antsika fiainana bateria hatramin'ny 24 andro. Ity terminal vaovao ity dia manana endrika mitovy amin'ny Nokia nipetraka teto ambonin'ny tany taloha kelin'izay, izay ahitantsika endrika tena madio, habe kely ary feo pastel amin'ireo tranga ireo.
Ny Nokia 216 dia manome antsika efijery 2,4-inch miaraka amina vahaolana QVGA, fakan-tsary eo anoloana sy aoriana a 0,3 mpx. Miasa amin'ny tamba-jotra 2.5G fotsiny ity fitaovana ity ary natao ho an'ny tsena mipoitra, manolotra anay hatramin'ny 24 andro fiandrasana sy resaka 18 ora. Ity fitaovana ity dia mampiditra tuner FM sy SIM roa. Izy io dia mitantana ny andiany 30+, ary tantanan'ny 16MB RAM. Na eo aza ny maha fitaovana mahazatra azy dia manana ny Opera Mini Browser ankoatry ny fampidirana ireo fampiharana mahazatra fanairana, famantaranandro, kalandrie, fanaovana kajy, naoty, jiro ankafizin'ny asa hafa.
Ny Nokia 216 dia afaka mitahiry fifandraisana hatramin'ny 2000 ary mamela antsika hanitatra ny toerana fitahirizana hatramin'ny 32 GB ihany koa. Ho hita amin'ny loko mainty, volondavenona ary manga izy ary misy refy 118x50x13.5 mm miaraka amin'ny lanjan'ny 83 grama. Raha te hizara ny atin'ny fitaovany amin'ny hafa ny mpampiasa dia tsy maintsy hataon'izy ireo amin'ny alàlan'ny fifandraisana Bluetooth. Ny Nokia 216 dia halefa any India amin'ny volana oktobra amin'ny 30 euro mahery.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Microsoft mandefa ny Nokia 216, telefaona asongadin'ny tsena vao misondrotra
Krod dia hoy izy:
Tiako ny orinasa manomana vokatra ho an'ny tsena vao misondrotra, raha tsy izany hadino izy ireo. Saingy nieritreritra aho fa lany tamingana i nokia, tsy microsoft ve izao?
Valiny tamin'i Krod
Ny Google Pixel dia tsy hanana fanoherana kely amin'ny rano miaraka amin'ny fanamarinana IP53
Back to the Future kiraro manana daty famotsorana